ဘ​လော့​မှာ Social Bookmarking ​အ​လွယ်​ထည့်​မယ် ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ဘ​လော့​မှာ Social Bookmarking ​အ​လွယ်​ထည့်​မယ်
​ဒီ​နေ့​တင်​တဲ့ ​ပို့(စ်)​လေး​က​တော့ Social Bookmarking-Tooltips ​ကို ​ဘ​လော့ ​ပို့(စ်) ​အောက်​မှာ ​ထည့်​နည်း​လေး​ပါ။ ​သိ​ပြီး​ကြ​သော ​မိတ်​ဆွေ​တွေ​လည်း​များ​သ​လို ​မ​သိ​သေး​တဲ့ ​မိတ်​ဆွေ​တွေ​လည်း​ရှိ ​နိုင်​ပါ​တယ်။​ဒါ​ကြောင့်​မ​သိ​သေး​တဲ့​မိတ်​ဆွေ​တွေ​ရှာ​ရ​အ​ခက်​အ​ခဲ ​ဖြစ်​နေ​သူ​တွေ​အ​တွက်
​ဝေ​မျှေ​ပး​လိုက်​တာ​ပါ။ ​ကြိုက်​ကြ​မယ်​လို့ ​လည်း​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်။ ​အောက်​မှာ​လုပ်​ဆောင်​ချက် ​နည်း​လမ်း​တွေ​ကို ​သေ​ခြာ​ရှင်း​ပြ​ထား​ပါ​တယ်..
Selectablog ​ဆို​တဲ့​နေ​ရာ​မှ ​မိ​မိ​က ​ဘ​လော့​တွေ ​များ​နေ​ရင် ​ကိုယ်​ထည့် ​ခြင်​သော ​ဘ​လော့​အ​မည်​ကို ​ရှာ​ဖွေ ​က​လစ်​ပေး​ရ​ပါ​မယ်...
Edit Contact ​နေ​ရာ ​ကို​က​လစ်​တာ​နဲ့ ​မိ​မိ​တို့ ​ထည့်​ခြင်​တဲ့ ​ကုဒ်​တွေ​ကျ​လာ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်..
​ကော်​ပီ​ယူ​လိုက်​ပါ... ​အ​ကယ်​လို့ ​ကုဒ်​မ​ယူ​လို​ပါ​က ​အောက်​က Add Widget ​ဆို​တာ​က​လစ်​ပေး​ပေါ့။
►1. Login ​လုပ်​လိုက်​ပါ ​ဘ​လော့​ကာ​ကို
►2. Layout ​ကို​က​လစ်​ရ​ပါ့​မယ် ​မိ​မိ​တို့ Dashboard ​က​နေ​ပေါ့
►3. AddaGadget ​ကို​က​လစ်​ပေး​လိုက်​ပါ
►5. ​ကော်​ပီ​ယူ ​လာ​တဲ့ ​ကုဒ်​တွေ​ကို ​ထည့်​လိုက်​ပါ
<<<​မန်​ဘာ​ဝင်​ပြီး...Fb Like ​ခြင်း​ဖြင့် ​အား​ပေး​ကြ​ပါ​နော်
​အောင်​အောင်(​မ​က​စ) ​ရဲ့ ​ဘ​လော့​ခ​ရီး​သည်​လေး​အား ​အား​ပေး​နေ​ကြ​တဲ့​အ​တွက် ​ကျေး​ဇူး​အ​ထူး​တင်​ပါ​တယ်.. ​တုန့်​ပြန်​မှု​အ​နေ​နဲ့ fb like ​လေး​တော့ ​လုပ်​ပေး​ခဲ့​ကြ​ပါ​နော်.. ​တတ်​စွမ်း​သ​မျှ ​တွေ့ ​ရှိ​သ​မျှေ​လး​တွေ​ကို ​ပြန်​လည် ​မျှေ​ဝ​နေ​ပါ့​မယ်...။ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​တာ​များ​ရှိ​ခဲ့​ပါ​က...cbox ​မှာ ​ပြော​ခဲ့​ကြ​ပါ​နော်..
​ကြက်​ဥ​ပုံ​စံ ​နှင့် ​အ​သဲ​ပုံ​စံ social widgets ...
​ဘ​လော့​ကာ​အ​တွက် Popup Subscribe Box ​လေး​တွေ
Microsoft Office Professional Plus 2007 (500 MB)
​ကွန်​ပျူ​တာ​ရဲ့ ​ဦး​နှောက်​ကို ​များ​များ ​အ​လုပ်...
Template ​ဒေါင်း​ယူ​ပြီး xml ​ဖိုင်​ရ​ယူ​နည်း ( ...
​ဘ​လော့​ပို့စ်​တွေ​ကို Facebook ​ပေါ်​ရှယ်​နည်း( c...
​ဘ​လော့​တွေ..​ဆိုဒ်​တွေ ​ရဲ့​မှား​ယွင်း​မှု​ကို ​ရှ...
​အ​သဲ​ပုံ​စံ ​နှင့် ​အ​သဲ​ပုံ​စံ social widgetsေ...
Social Media Widget With Rss Subscribe Box
InDesign CS5 Interactive Documents and Presentatio...
​အ​ကြိုက်​ဆုံး​ဆိုဒ်​တွေ​ကို Computer ​ပေါ်​မှာ Ap...
Computer ​အ​တွက်​လုပ်​သင့်​သော ​နည်း​လမ်း​များ (၁)...
Blogger Labels ​တွေ​ကို Scorrl Bar ​လေး​နဲ့​ထား​နည...
​ဘ​လော့​မှာ ​မောက်​ကာ​ဆာ​ကို​အ​လွယ် ​ထည့်​နည်း
​ဘ​လော့​ကာ ​ဆိုဒ်​ဘား ​အ​တွက် ​သွား​ခြင်​သော ​နေ​ရ...
BlazeVideo SmartShow v1.3.0.0 (36 MB)
How to Add A Comment Count Bubble To Blogger Post ...
​ဘ​လော့​ပေါ်​တင်​တဲ့​ပုံ​တွေ ​မောက်​တင်​တာ​နဲ့ ​ကာ​...
​ဘ​လော့​မှာ ​ကြော်​ငြာ​တွေ (​သို့) ​ဆိုဒ်​တွေ​ကို...
​ဘ​လော့​မှာ Slider ​တစ်​ခု​ပြု​လုပ်​ခြင်း (၄)
Facebook Fan Page ​ကို​မ​လို​ခြင်​ပြန်​ဖျက်​နည်း
​မိ​မိ​တို့​ဘ​လော့​ကို PASSWORD ​ခံ​ထား​ကြ​မ​လား ...
​မိ​မိ​ဘ​လော့​မှာ Recent Comment ​ဆို​တဲ့ ​ကွန်​မ...
​ဘ​လော့​မှာ Slider ​တစ်​ခု​ပြု​လုပ်​ခြင်း (၃)
​ဘ​လော့​မှာ Slider ​တစ်​ခု​ပြု​လုပ်​ခြင်း (၂)
(Header)​ပေါ်​မှာ Add Page Element​ထည့်​နည်း​လေး​ပါ...
Simple Recent Posts Widget ​လေး​ထည့်​ကြ​မယ်
​ဘ​လော့​မှာ Slider ​တစ်​ခု​ပြု​လုပ်​ခြင်း (၁)
​ဘ​လော့​မှာ ​ပုံ​တွေ​ကို Scoorl Bar ​လေး​နဲ့ ​အ​မျ...
MouseOver Social Bookmark ​လေး​ထား​ချင်​ရင်
Popular Post Simple Style ​လေး​လို့​ဆို​ရ​မယ် ​လန်...
​ဘ​လော့​မှာ ​နောက်​ဆုံး​တင်​သ​မျှ ​ဆို​တာ​လေး​ကို ...